မက္ကဆီကို၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မူးယစ်ရာဇာများက ထိန်းချုပ်နေဟု အမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်း ပြော။ သမ္မတဖြစ်သူမှာ မူးယစ်ရာဇာများအား ထိပ်တိုက်ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိသဖြင့် တစ်ချိန်က ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေဟု ပြော။ မူးယစ်ရာဇာတို့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဖောက်ခွဲရေးဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက် – H2Oupdatenews
မက္ကဆီကို၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မူးယစ်ရာဇာများက ထိန်းချုပ်နေဟု အမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်း ပြော။ သမ္မတဖြစ်သူမှာ မူးယစ်ရာဇာများအား ထိပ်တိုက်ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိသဖြင့် တစ်ချိန်က ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေဟု ပြော။ မူးယစ်ရာဇာတို့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဖောက်ခွဲရေးဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်
oungmarine11@outlook.com 30/04/2021	No Comments
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မူးယစ်ရာဇာများက ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရလက်ထက် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်းတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်ဟု Russia Today (Apr. 29,2021) က ရေးသားသည်။
မက္ကဆီကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် မူးယစ်ရာဇာများ၏ ကျယ်ပြန့်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပုံမှာ သံသယ ဖြစ်ဖွယ် မရှိကြောင်း၊ သမ္မတဖြစ်သူ လိုပက်ဇ်အိုဘရာဒိုမှာ မူးယစ်ရာဇာများအား ချဉ်းကပ်ရာတွင် ထိပ်တိုက်ဆန့်ကျင်သည်ဟူ၍ မရှိသဖြင့် တစ်ချိန်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ဟု ရှု့မြင်ကြောင်း သံအမတ်ဟောင်း ခရစ်စတိုဖာလန်ဒိုက သံတမန်ဟောင်းများနှင့် ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးရာတွင် အခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ မက္ကဆီကိုသမ္မတ_လိုပက်ဇ်_အိုဘရာဒိုကမူ အမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်း၏ သုံးသပ်ချက်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပယ်ချလိုက်သည်။
မက္ကဆီကိုတွင် အကြမ်းဖက်မှု အများဆုံး ကျူးလွန်လျှက်ရှိသည့် မူးယစ်ရာဇာများအနက်မှ ဂိုဏ်းတစ်ခုသည် အစိုးရအား တိုက်ခိုက်ရာတွင် နည်းဗျူဟာသစ်တစ်ခုကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်၌ နိုင်ငံအတွင်း ပြည်နယ် ၃-ခုထက်မနည်းတို့တွင် အစိုးရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအား ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားသည်ဟု #Orgnized_Crimes_and_Corruption_Reporting_Project (#OCCRP) Apr.27,2021 ဂျာနယ်တွင် Jullet Pineda က ရေးသားသည်။
#ဂျာလစ်စ်ကို_မျိုးဆက်သစ် သည် မက္ကဆီကိုတွင် ကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုအပါအဝင် တရားမဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ အမြတ်အစွန်းများစွာ ရယူလျှက်ရှိသည်။ ပြည်နယ် ၃-ခုရှိ အာဏာပိုင်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအချို့တွင် ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ဒရုန်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်သော်လည်း လူနှင့် အဆောက်အအုံများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေလောက်သည့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသည့် ဒရုန်းများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ မျှော်လင့်သလောက် ထိရောက်မှု များစွာ မရှိကြောင်း၊ မက္ကဆီကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုသည်။
မည်သည့် ပေါက်ကွဲပစ္စည်းဖြစ်သည်ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။ ဒေသခံ မီဒီယာများက ရေးသားရာတွင်မူ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်၌ အနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားသော တိုက်ခိုက်မှု၌ ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်များက လက်ပစ်ဗုံးပါ ဒရုန်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂-ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး သံသယရှိသူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊ မူးယစ်ရာဇာအချင်းချင်း အထူးသဖြင့် ဂျာလစ်စ်ကို_မျိုးဆက်သစ်နှင့် ၎င်း၏ပြိုင်ဘက် #ကာတီလက်စ်_ ယူနီဒိုတို့အကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်ကို ဒေသခံများ၏ သတင်းပေးခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါနယ်မြေ၌ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အားကို တိုးမြှင့် ချထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့အား ကိုးကား ဖော်ပြသည်။
ဂျာလစ်စ်ကို_မျိုးဆက်သစ်သည် ဖင်တာနီးလ်နှင့် အခြားသေစေနိုင်သော မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသို့ တင်သွင်းရာ၌ တာဝန်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ အဆိုးရွားဆုံးနှင့် အကြမ်းဖက်မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုကုန်ကူးသည့် အဖွဲ့အစည်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဋ္ဌာနက သတ်မှတ်ထားသည်။
မူးယစ်ဆေး မှောင်ခိုကုန်ကူးခြင်းနှင့် ဖျက်စွမ်းအားမြင့် လက်နက်များကို အသုံးပြု၍ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများကို အားပေးကူညီသည်ဟုဆိုကာ မူးယစ်ရာဇာ ၂-ဦးကို အမေရိကန်အစိုးရက ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။
သို့သော် ဂျာလစ်စ်ကိုမျိုးဆက်သစ်ဂိုဏ်းက ပေါက်ကွဲပစ္စည်းသယ်ဆောင်သည့် ဒရုန်းများကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ခြင်း မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်ချေ။ အခြားအဖွဲ့များကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ယမန်နှစ် သြဂုတ်လတည်းက အလားတူနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများသည် ပေါက်ကွဲအား ပြင်းထန်သည့် C-4 နှင့် အခြားဓါတုဗေဒပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ ရောစပ်ထည့်ထားသည့် ဗူးကို ဒရုန်းတွင် တိပ်ဖြင့် ခိုင်မြဲစွာ ချည်နှောင်ပြီး အဝေးမှ ရီမုဒ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြိုင်ဖက်ဂိုဏ်းနှစ်ခုတို့အကြား တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒရုန်းနှင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ အာဏာပိုင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မက္ကဆီကို မီဒီယာ El Universal က ဖော်ပြသည်။
(( ကမ္ဘာမြေ၏ တစ်နေရာတွင် လက်နက်ဘေးကြောင့် နေ့စဉ် သေကြေပျက်စီးမှုများဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်ဟုဆိုလျှင် စာဖတ်သူအများစုမှာ လစ်ဗျား၊ ယီမင်၊ ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့ကို မြင်ယောင်မိကြမည် ထင်ပါသည်။
သို့သော် ထိုစံချိန်ကို ချိုးနေသည်မှာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အထိ ၆-နှစ်တာ ကာလအတွင်း မူးယစ်ဆေးနှင့် ဆက်နွယ်၍ အသတ်ခံရသူပေါင်း ၆-သောင်းထက်မနည်း ရှိသည်။ ၂၀၁၃-ခုနှစ်အရောက်တွင် ထိုအရေအတွက်မှာ ၁-သိန်း ၂-သောင်းကျော် ဖြစ်သွားပြီး ၎င်းတွင် ပျောက်ဆုံးနေသူ ၂-သောင်း ၇-ထောင် မပါသေးချေ။
မက္ကဆီကိုတွင် နာမည်ကြီး မူးယစ်ဂိုဏ်း ၁၀-ဂိုဏ်းမျှ ရှိနေပြီး၊ မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ လူကုန်ကူးခြင်း၊ လက်နက်မှောင်ခိုခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချခြင်းမှအစ ရာဇဝတ်မှုအမျိုးမျိုးကို ဇက်ရဲလက်ရဲ ကျူးလွန်လျှက်ရှိသည်။
မီဒီယာနှင့် ဂျာနယ်လစ်တို့၏ မရိုးဖြောင့်ခြင်း၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး သကာလ မက္ကဆီကိုမှာလည်း ပညာရေး၊ လူမှုရေးတို့တွင် ဆုတ်ယုတ်ကာ ဆင်းရဲမွဲတေသူအများ တိုးပွားလျှက် ရှိလေသည်။ ။သတင်းဘာသာပြန်သူ))
(((RT.,Apr. 29 2021,” A former US ambassador to Mexico has claimed that up to 40% of the country is controlled by drug cartels.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)))
Previous Previous post: ဂျူးဘာသာရေးပွဲတော်တွင် စုပြုံတိုးဝှေ့ရာမှ လူချင်း နင်းမိကြ၍ ၄၄-ဦး သေဆုံး၊ ဗုံးလန့်သည်ဆိုသော်လည်း အကြောင်းရင်းကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေး၊ နိုင်ငံ့လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ကို အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ကန့်သတ်ချက်များကို လျှော့ချပေးခဲ့ရာမှ လူ သိန်းချီစုဝေးခဲ့
Next Next post: မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကို ကူညီရန်အသင့်ရှိ၊ အာဆီယံအထူးအစည်းအဝေး သဘောတူညီချက်များအား ထောက်ပံ့ ပေးသွားမည်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် သတင်းထုတ်ပြန်